China iron oxide red 110/120/130/180/190 mpanamboatra sy mpamatsy | Shencai Pigment
Pigment oksida vy
oksida vy mena 110/120/130/180/190
FAMPANDROSOANA: vovoka trigonal mena-mena ka hatramin'ny volomparasy. Sady voajanahary no sentetika. Ny voajanahary dia antsoina hoe Saffron ary manana hakitroka 55.25. FINENESS 0.4 ~ 20um. Melting Point 1565. Rehefa may dia alefa ny oxygen ary azo ahena ho vy amin'ny hidrogen sy-dioxide karbonika. Tsy mety levona anaty rano, mety levona amin'ny asidra hidroklorika, asidra solifara, mety levona kely amin'ny asidra azota sy ny masirasira. Izy io dia manana fanoherana hazavana tsara, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana asidra, fanoherana Alkali ary fanoherana ny harafesina. Fielezana tsara, fandokoana matanjaka sy hery afenina, tsy misy fitrana solika sy rano azo afindra Non-poizina. Ny fifantohana ambony indrindra azo ekena amin'ny rivotra dia 5 mg / M 3.
1. Amin'ny indostrian'ny fitaovam-panorenana dia ampiasaina amin'ny simenitra miloko, taila vita amin'ny simenitra vita amin'ny simenitra, tile vita amin'ny simenitra miloko, tile vita amin'ny simenitra, gorodona vita amin'ny gorodona, fotaka miloko, asfalta miloko, terrazzo, taila mozika, marbra artifisialy sy rindrina STUCCO, sns. 2. Ampiasaina amin'ny fandokoana sy fiarovana ireo akora misy loko isan-karazany, ao anatin'izany ny rindrina anatiny sy ny rindrin'ny rindrina ivelany, ny fonosana vovoka sns. Mety ihany koa ho an'ny primera miorina amin'ny solika sy ny akanjo ambony, toy ny epoxy, alkyd, Amino, sns. Azo ampiasaina amin'ny loko kilalao, loko haingon-trano, loko fanaka, loko elektroforetika ary Enamel. Ny Iron Red Primer dia safidy tsy azo harafesina amin'ny loko mena lafo vidy, mamonjy vy tsy ferrous. 3. Ho an'ny fandokoana ny vokatra plastika, toy ny polymère thermosetting sy ny Thermoplastic, ary ny vokatra vita amin'ny fingotra, toy ny fantsona anaty fiara, fantsona anaty fiaramanidina, fantsona anaty bisikileta, sns. 4, ho an'ny fitaovana fikosoham-bary avo lenta avo lenta, ampiasaina amin'ny fitaovana enti-miasa mazava tsara, polishing fitaratra optika. Ny metallurgy Powder madio madio dia ny fitaovana fototra ho an'ny famokarana metaly magnetika isan-karazany sy ny vy hafa vita amin'ny firaka avo lenta. Vita avy amin'ny vy (2+) sulfate (anhydrous) na vy oksida mavo na vy ifotony amin'ny alàlan'ny fikajiana ny mari-pana ambony na mivantana avy amin'ny mpanelanelana anaty rano.
Kitapo taratasy 25 kg / asa-tanana, 25MT / 20FCL (Red Oxydeida vy);
Kitapo taratasy 25 kg / asa-tanana, 12-14MT / 20'FCL (Iron Oksida mavo);
Kitapo taratasy 25 kg / asa-tanana, 25MT / 20'FCL (Iron Oksida vy)
Kitapo taratasy 25 kg / asa-tanana, 25MT / 20'FCL (Iron Oxydeida maitso)
Kitapo taratasy 25 kg / asa-tanana, 25MT / 20'FCL (Blue Oxydeida manga)
Kitapo taratasy 25 kg / asa-tanana, 25MT / 20'FCL (Iron Oxide Brown)
Kitapo taratasy 25 kg / asa-tanana, 25MT / 20'FCL (voasary vy oksida)
1. ekeo ny fanaraha-maso ny SGS, CCIC ary ny sampana fanaraha-maso iraisam-pirenena hafa.
2.Fampana maimaim-poana halefa aminao.
Traikefa 3,14 taona.
Ny loko SHENMING ferric oxide pigment anorganic pigment, loko mena oksida vy amidy eo ambanin'ny marika marika "SHENMING" dia misy amin'ny mena, mavo, mainty, maintso, volontsôkôlà, volomboasary, manga.
"SHENMING" marika vovoka vita amin'ny volo vita amin'ny vy oxide mena 130 dia manana laza malaza eny an-tsena ary amidy tsara manerana ny firenena ny vokatra.
Ny fisafoana CCIC, CIQ, BV, SGS dia ekena, ary koa serivisy santionany maimaimpoana.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fizarana fanondranana any Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient, Azia atsimo, Amerika atsimo, Afrika, Rosia ary Korea atsimo dia mitombo ary ny kalitaon'ny vokatra sy ny lazany dia nahazo fiderana avo be.
Raha liana amin'ny fividianana vovo-dronono vy oxide mena 130 avy any Shina ianao, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT FACTORY no safidinao tsara indrindra.
Manana traikefa nandritra ny 17 taona izahay, vonona hanolotra serivisy avo lenta sy tsara ho anao.
Anaran'ny varotra IRON OXIDE RED
Fomba fanaterana Powder
Fanondroana loko Kolontsaina mena 101 (77491)
CAS No./EC No. 1309-37-1 / 215-168-2
Specifications Hevitra ato Anatiny (Fe2O3) % ≥95
Fitrohana solika ml / 100g 15 ~ 25
Res. Amin'ny harato 325 % ≤0.3
Masira mety levona amin'ny rano % ≤0.3
hamandoana % ≤1.0
sanda pH 5 ~ 7
Gravity manokana g / sm3 5.0
Tinting tanjaka (ampitahaina amin'ny fenitra) % 95 ~ 105
Fahasamihafana loko ∆E (ampitahaina amin'ny fenitra) ≤1.0
Fonosana varotra Ao anaty kitapo 25kg / kitapo 1000kg avy eo nofonosina
Fitaterana sy fitehirizana Arovy amin'ny toetrandro / magazay amin'ny toerana maina
Safety Ny vokatra dia tsy sokajiana ho mampidi-doza amin'ny EC 1907/2006 & EC 1272/2008
Manaraka: mavo oksida vy 311/313/920
Volondavenona vy volondavenona
Black oxide mainty 722/750
Volontany oksida vy 600/610/663/686
Blue oxide vy
Orange oksida vy 960
Green oxide iron 5605/835
Vohitra Guzhuang, Tanànan'i Shangzhuang, faritra Luquan, Shijiazhuang, Hebei, Sina